Taliyaha Asluubta oo wili ku jiro booqashadiisa shaqo uu ku joogo wadanka Qatar. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliyaha Asluubta oo wili ku jiro booqashadiisa shaqo uu ku joogo wadanka...
Taliyaha Asluubta oo wili ku jiro booqashadiisa shaqo uu ku joogo wadanka Qatar.
S/guud Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa guul ku tilmaamay wada hadalka dhex maray labada dhinac, isaggoo tilmaamay in Safarka uu ku yimid Qatar iyo Heshiisyadda Dowladdaasi ay la galeen miro dhalkooda dhowaan la arki doono.
Previous articleXarumo dheeraad ah oo laga heli doono adeegyada caasimadda oo xariga laga jaray.
Next articleKa Hortagga Kharta Kaallimaha Shidaalka iyo arrimo kale oo la isku weydiiyay kulankii golaha wasiirada Puntland.